China Big chinzvimbo gorosi furawa chigayo Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
Big chinzvimbo gorosi furawa chigayo
Iyi michina inowanzoiswa muzvivakwa zvekongiri zvakasimbiswa kana simbi masisitimu ezvivakwa, ayo anowanzo kuve mashanu kusvika matanhatu matafura akakwirira (kusanganisira gorosi yegirosi, imba yekuchengetera hupfu, uye imba inosanganisa furawa).
Our furawa hwokugaya mhinduro vari ainyanya akagadzirirwa maererano American gorosi uye Australia chena yakaoma gorosi. Kana uchikuya imwe chete yegorosi, hupfu hwekudzora huwandu hwacho ndi76-79%, nepo madota ari 0.54-0.62%. Kana paine mhando mbiri dzehupfu dzinogadzirwa, huwandu hwehupfu hwekuburitsa uye madota zvichave 45-50% uye 0.42-0.54% yeiyo F1 uye 25-28% uye 0.62-0.65% yeiyo F2. Kunyanya, kuverenga kwacho kunoenderana nechero chinhu chakaoma. Iko kushandiswa kwesimba kwekugadzirwa kwetoni imwe yeupfu hakuna anopfuura 65KWh pane zvakajairwa mamiriro.
Muchikamu chekutsvaira, tinotora kuomesa mhando yekuchenesa technology.it inowanzo sanganisira 2 nguva kupepeta, ka2 kurova, 2times kubvisa matombo, imwe nguva kuchenesa, ka5 chishuwo, ka2 kunyorova, katatu magineti
Kupatsanuka nezvimwewo.Muchikamu chekutsvaira, pane akati wandei maitiro easpiration ayo anogona kudzora guruva rekusasa-kubva mumushini uye chengetedza nzvimbo yakanaka yekushanda. Iri pamusoro pepepa rinokwanisa kubvisa zvakanyanya
yecoarse offal, yepakati saizi offal uye yakanaka offal mune yegorosi.Sekutsva chikamu hachisi onley yakakodzera gorosi inotengeswa kunze nehunyoro hunyoro uye zvakare yakakodzera tsvina tsvina kubva kune vemuno vatengi.
Muchikamu chekugaya, pane mhando ina dzehurongwa hwekugaya gorosi kuti rive hupfu. Iwo ari mashanu-Break system, 7-Kuderedza system, 2-Semolina system uye 2-Muswe system. Vanozvinatsa vanogadzirirwa kuti vawane yakachena semolina yakatumirwa kuReduction iyo inovandudza hupfu mhando nemahombekombe akakura. Iwo iwo anotenderera eReduction, Semolina, uye Tail masystem ari akatsetseka anotenderera ayo akanyatsoputika. Iyo dhizaini yese ichaisa inshuwarisi shoma yakasanganiswa mukati meiyo branho uye gohwo rehupfu rakawedzerwa.
Nekuti iyo tsime rakagadzirwa pneumatic yekusimudza system, iyo yese chigayo zvinhu inotamiswa nePamusoro kumanikidza fan. Imba yekuchera ichave yakachena uye yehutsanana yekutora aspiration
Hupfu Blending Chikamu
Hupfu hwekusanganisa sisitimu kazhinji hune pneumatic irikupa system, hombe furawa yekuchengetedza system, kusanganisa system uye yekupedzisira furawa kuburitsa system.Iyo ndiyo nzira yakakwana kwazvo uye inobudirira kugadzira furawa yakaringana uye chengetedza kugadzikana kweupfu hunhu. Kune iyi 500TPD furawa chigayo kurongedza uye kusanganisa sisitimu, pane matanhatu eupfu ekuchengetera mabhini.Iyo hupfu mumabhini ekuchengetera inopepereswa mu6 hupfu kurongedza mabhini uye kurongedzwa kwekupedzisira.Furawa ichave yakasanganiswa zvakanaka kana yaburitswa kubva muhupfu hwemabhini .Screw conveyor inotongwa ne frequency converter kuona hupfu hupfu hwakaburitswa nehunhu hwakaringana uye huwandu. Hupfu hunhu huchagadzikana mushure mekusanganisa maitiro iyo yakakosha kwazvo hupfu hwekugaya. Pamusoro pezvo, bran inochengetwa mumabhini mana emabhini uye yakarongedzwa pakupedzisira.
Yese kurongedza michina ndeye automatioc.Muchina wekutakura une maficha epamusoro kuyera kurongeka, nekukurumidza kurongedza kumhanya, kuvimbika uye kugadzikana kushanda.Inogona kuyera uye kuverenga otomatiki, uye inogona kuunganidza weight.The kurongedza muchina une basa remhosva yekuzviongorora. Mushini wekusona une otomatiki wekusona nekucheka basa.Muchina wekutakura une chisimbiso mhando bhegi-yekuchinjisa mashandiro, whih inogona kudzivirira zvinhu kubva kubuda.Iyo kurongedza magadzirirwo anosanganisira 1-5kg, 2.5-10kg, 20-25kg, 30-50kg. The vatengi vanogona kusarudza zvakasiyana chiputiriso Specification maererano nezvinodiwa.
Magetsi Kudzora Uye Management
Muchikamu chino, isu tinopa magetsi ekudzora kabati, tambo yemasaini, tambo dzematare netambo dzematare, uye zvimwe zvikamu zvekuisa zvemagetsi Chimbichimbi uye mota yemagetsi tambo haina kuverengerwa kunze kwemutengi anonyanya kudiwa.PLC yekudzvanya sisitimu sarudzo yekusarudzika kumutengi.Mu PLC yekudzora system, michina yese inodzorwa neProceded Logical Controller iyo inogona inishuwa michina ichimhanya zvakanaka uye zvakatsetseka. Iyo sisitimu ichaita kumwe kutonga uye kuita maitiro zvinoenderana kana chero muchina uri mukukanganisa kana kumiswa zvisina kujairika. Munguva imwechete ichavhundutsa uye kuyeuchidza mushandi kugadzirisa zvikanganiso.Schneider dzakateedzana zvikamu zvemagetsi zvinoshandiswa mune yemagetsi kabati. Iyo PLC mhando ichave Nokia, Omron, Mitsubishi uye nedzimwe International Brand. Iko kusanganiswa kweakanaka magadzirirwo uye akavimbika magetsi zvikamu zvinodzivirira iyo yese chigayo ichimhanya zvakanaka.
Unyanzvi (t / 24h)
Roller Mill Muenzaniso
Mushandi Per Shift
Nzvimbo LxWxH (m)
Pneumatic / magetsi
Pashure: Twin Screw Volumetric Anopa
Zvadaro: Dhirowa Magnet
Compact Chibage Mill
Yakaiswa Yakakwira Kumanikidza Jet Sefa